के छ विप्लवको भित्री रणनीति, कसलाई पुग्छ यसले फाइदा ? - Everest Dainik - News from Nepal
के छ विप्लवको भित्री रणनीति, कसलाई पुग्छ यसले फाइदा ?
विप्लवको चुनाव खारेज अभियान– सैन्य शक्ति प्रदर्शनको अवसर ?
काठमाडौं, शान्तिपूर्णरुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरी सम्पन्न हुन सफल भएपनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको अवस्था भने फरक देखिएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा उम्मेदवार लक्षित गरी गरिएका श्रृंखलाबद्ध आक्रमणले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।
सुरक्षाको संवेदनशील अवस्था हेर्दा गृह प्रशासन र सरकार मुख्य आलोचनाको निशाना बनेको छ ।
उता उम्मेदवार लक्षित आक्रमणमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लागि भने यो सैन्य क्षमता प्रदर्शनको अवसर बनेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपालमा निर्वाचन उपयोग नगर्ने समूहहरु बेलाबखतमा देखा नपर्ने होइनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि २०४८ सालमा मोहनबिक्रम नेतृत्वको मसालले निर्वाचन बहिस्कार गरेको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आफ्नो दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा निर्वाचन बहिस्कार गर्दै आयो ।
तर अहिले विप्लवहरुले भने यो निर्वाचनलाई बहिस्कार हैन, खारेज भन्ने शब्दका साथ बिरोध शुरु गरेका छन् । खासगरी विगतमा माओवादीको बलियो प्रभाव भएको क्षेत्र रोल्पा रुकुम, पूर्वी पहाड र राजधानी छेउछाउका जिल्लामा उनीहरुले उम्मेदवारलाई ताकेर बम र गोली प्रहार गरेका छन् ।
विप्लव समूहले निर्वाचन बहिस्कार या खारेजका लागि जुन शैली अपनाएका छन, यसबाट उनीहरुको दुईवटा मुख्य रणनीतिको आँकलन गर्न सकिन्छ । पहिलो, उनीहरुको मुख्य लक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुमाथि रहेको छ । खासगरी रोल्पा र रुकुम र पूर्वमा समेत भएका आक्रमण माओवादी लक्षित छन् । यसका पछाडि पछिल्ला दिनहरुमा विप्लव समूहका कैयन् केन्द्रीय नेताहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका कारण उनीहरु अत्तालिएको या बदला लिन खोजेको देखिन्छ । यसको पुष्टि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत पत्रकारहरुसमक्ष गरेका थिए । प्रचण्डले माओवादीसँगको ‘इगो’का कारण उनीहरुले माओवादीलाई मुख्य निशाना बनाएका छन् । सँगैका सहयात्रीहरुमाथिको यो आक्रमण सैद्धान्तिक छैन । यसपछाडिको मनोविज्ञान ‘तिमीहरुले क्रान्ति छोडेऊ, हामी अझै बन्दूक बोकिरहेका छौं’ भन्ने प्रदर्शन गर्नु जस्तो देखिन्छ ।
दोश्रो रणनीति निर्वाचनमा त्रास र आतंकको अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ । उनीहरुका गतिविधि डर, त्रास र भयको सिर्जना गरेर निर्वाचनमा मतदाताहरुलाई जानबाट रोक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु रहेको प्रष्ट हुन्छ । उम्मेदवार र पार्टीका कार्यकर्ता, उनीहरु चढेको गाडी लक्षित गरेर आक्रमण गरेपछि मतदानको दिन आइपुग्दासम्म मतदाताका बीचमा के के हुने हो, कसो हुने हो, भन्ने त्रासको अवस्था सिर्जना गर्न उनीहरुले खोजेको देखिन्छ ।
केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा भने निर्वाचन प्रचारकै क्रममा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । यसलाई विप्लवहरुले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको अवसरका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् ।
विप्लव माओवादीले एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा अघि सारेको छ । तर पार्टीभित्रै यो कार्यदिशा स्पष्ट नभएको, पार्टीले गतिशीलता लिन नसकेको, आर्थिक अराजकता र अनशुसानहीनता बढेको भन्दै चर्को अन्तरविरोध समेत विगत केही वर्षदेखि चुलिएकै अवस्था छ । यो अवस्थामा विप्लवका लागि अहिलेको निर्वाचन आफूभित्रका अन्तरविरोधहरुलाई तत्कालका लागि प्रधान हुन नदिन र बाह्यरुपमा आफ्नो सैन्य क्षमता अरुलाई देखाउने अवसरका रुपमा निर्वाचन देखिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सरकारसँग वार्ता नगर्ने विप्लवको घोषणा
बम प्रहार गर्नु या गोली प्रहार गर्नु, त्यो पनि देशका बिभिन्न स्थानमा, झन योजनाबद्ध तरिकाले । यो सामान्य घटना पक्कै पनि होइन । राज्यले विप्लव समूहलाई आजसम्म महत्व दिएको नदेखिएपनि यो निर्वाचनमा उनीहरुले जसरी गतिबिधिहरु गरिहेका छन्, यसबाट उनीहरु सैन्यरुपमा समेत संगठित र एउटा शक्तिको रुपमा उदाउने कोशीसमा छन् भन्ने स्प्ष्ट हुन्छ । मिडियामा आएको कुरा सत्य मान्ने हो भने उनीहरुसँग ठूलो मात्रामा हतियार समेत भारतबाट भित्रिएको छ नेपालगञ्ज नाकाबाट । एउटा राजनीतिक शक्तिसँग यसरी हतियार भित्रिंदा, उनीहरुले बम र गोली प्रहार गर्दा समेत राज्यका तर्फबाट संवेदनशीलता देखाइंदैन भने यसको गम्भीर असर भविष्यमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
विप्लव माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा फाट्ट फुट्ट एक दुई स्थानमा सुतली बम पड्काए र केही स्थानमा अवरोध समेत गरे । निकै आशंका गरिएको प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा समेत कुनै अप्रिय घटना घटेन । तराईका कैयन् अपराधिक समूहहरुले समेत निर्वाचन बिथोल्ने साहस गर्न सकेनन् । तर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा भने निर्वाचन प्रचारकै क्रममा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । यसलाई विप्लवहरुले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको अवसरका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । यो पक्षलाई प्रशासनले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।
विप्वलहरुले घोषितरुपमा युद्दको घोषणा गरेका छैनन् । उनीहरु राज्यसँग त्यसरी विद्रोह गरेर गएको भए त्यो बेग्लै पक्ष हुन्थ्यो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उनीहरुले गरिरहेका गतिविधिहरु राजनीतिक चरित्रका देखिएका छ्रैनन् । यसका फाइदा गैर राजनीतिक चरित्र भएका अराजक अपराधिक समूहहरुले लिन सक्छन् । यसको जिम्मेवारी विप्लव समूहले लिने कि नलिने ? भन्ने प्रश्न समेत अहिले टडकारो बनेको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई घाइते बनाएर, या मतदातालाई बुथसम्म पुग्न नदिएर यो निर्वाचन खारेज हुन सक्दैन । त्यो शक्ति न विप्लव नेतृत्वसँग छ, न त्यसको सम्भावना नै । यो अवस्थामा ऐतिहासिक प्रकृतिको अहिलेको निर्वाचनमा जनपक्षिय वामपन्थी शक्तिहरुलाई विजय बनाउनुको साटो त्रास र भयको वातावरण सिर्जना गरेर विप्लव समूहले कुन एकीकृत क्रान्ति अघि बढाइरहेका हुन भन्ने प्रश्न समेत कतिपयले उठाएका छन् । जबकि अहिलेको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने यसले तिनै विप्लवहरु समेत सहभागी १० औं हजार बलिदान भएको जनयुद्दका प्राप्त उपलब्धि खोसिने सम्भावना बलियो छ ।
मात्रात्मक उपलब्धिबाट गुणात्मक उपलब्धिको बाटो समात्नुको साटो पाइएका अधिकार समेत गुमाउने किसिमका अहिलेका गतिविधिहरुबाट शक्ति प्रदर्शन त हुन सक्ला, एउटा आत्मसन्तुष्टि लिने अवस्था त सिर्जना हुन सक्ला, तर १० वर्षे जनयुद्द र १० वर्षे शान्तिकाल ब्यहोरेका नेपाली जनताका लागि भने यी गतिविधिहरुले सुखद अवस्था ल्याउने देखिन्न । यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ ।